သူ့ဆီ ဆက်သွယ် ရမည် နည်း
အောက်ပါ အကြောင်းများ ရှိလျှင် သင်၏ WIC သို့ ဖုန်းခေါ် ဆိုပါ…
WIC သို့မဟုတ် ပမာဏ ပမာဏ ရှိလျှင်
ကတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ခံရခြင်း သို့မဟုတ်
တို့ ပြုလုပ်1-844-234-4950 သို့ ဖုန်းခေါ် ဆိုပါ…
ပင် နံပါတ်ကို IC IC ၎င်းတို့က သင်၏ အစားအသောက် ခံစား ခွင့် များအား မည်သူမှ အသုံးပြုခြင်း မရှိစေရန် တားမြစ် ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင့် အား ကတ် အသစ်တစ်ခု ထုတ်ပေးရန် ကူညီ မည်ဖြစ်သည်.
WIC တင်ထားသော လက်ရှိ ရရှိနိုင်ပါသည် W လ သန်းခေါင်ယံအချိန်တွင် သင့် သင့် eWIC
Enfamil (စ ကလေးငယ်) Enf
စတိုးဆိုင်များ ကို ရှာရန်
လက်ကျန် စာရင်းကို စစ်ဆေး ပါ
သင်၏ စာရင်း လက်ကျန် ကို နည်းလမ်းမျိုးစုံ ဖြင့် စစ်ဆေး နိုင်ပါသည် -
IC လက်ရှိ ခံစား ခွင့် များကို op IC IC IC IC IC IC IC IC IC IC IC IC
သက် ၏ လက်ရှိ စာရင်း လက်ကျန် ကို ပ ရ င့်ထုတ်ပေးရန် ကုန် ခြောက် ဆိုင် ရှိ ငွေ ကိုင် ကို ပြော ပါ သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှု ဌာနသို့ သွား ပါ.
လက်ကျန် စာရင်းကို စုံစမ်းရန် အတွက် သင်၏ W W W
လက်ကျန် စာရင်းကို www.ebtedge.com သွား ပါ။
သင်၏ eWIC ကတ် ဖြင့် စျေးဝယ် ထွက် ခြင်း
လိုအပ်သည် ကို ဝယ် ဝယ်။ င့
လုပ်ဆောင်ချက် အ စ တွင် သင်၏ W W W ဆွဲ ပါ။
ပင် နံပါတ်ကို ထည့် ထည့် ပေါ်ရှိ ပေါ်ရှိ ingrese ခလုတ်ကို ပေါ်ရှိ
ငွေ ကိုင် မှ သင်၏ လက်ကျန် အကျိုး ခံစား ခွင့် နှင့် အကျိုး ခံစား ခွင့် သက်တမ်း ကုန်ဆုံး မည့် နေ့များ ပါ သည့် ပြေ စာတစ်စောင် ကို သင့် အား ပေးပါ လိမ့် မည်.
သင့် မည် သည့် W W W
သည့် EBT၊ SNAP စ တိုး
ပင် နံပါတ် အကြောင်း
ပင် နံပါတ် (တစ်ကိုယ်ရေ သက်သေခံ နံပါတ်) ဆိုတာ ဘာလဲ။
ပင် နံပါတ် ဆိုသည်မှာ သင်၏ WIC အကျိုး ခံစား ခွင့် များကို ရရှိ စေနိုင် မည့် သင့် ကတ် နှင့် အတူ ပါ သော ဂဏန်း လေးလုံး ပါ လျှို့ဝှက် နံပါတ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပင် နံပါတ်ကို ရွေးချယ် သည့် အခါ သင် မှတ်မိ လွယ် သော နံပါတ် လေးလုံးကို ရွေးချယ် ပါ၊ သို့သော် အခြား သူတစ်ယောက် သိရှိရန် ခက်ခဲသော နံပါတ် မျိုး ဖြစ်ပါစေ (ဥပမာ - သင့် မိဘ သို့မဟုတ် ကလေး၏ မွေးနေ့)။
ကတ် တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့် ပင် နံပါတ်ကို သိရှိပြီး သင့် ကတ် ကို အသုံးပြု. သင့် ခွင့် ပြုချက် မရှိဘဲ သင့် အစားအစာ ခံစား ခွင့် များကို ရယူ ခဲ့ပါ က ထို ခံစား ခွင့် များကို အစားထိုး ပြန် ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ.
သင့် ပင် နံပါတ်ကို နည်းလမ်း များစွာ ဖြင့် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသည် -
အွန်လိုင်း အကောင့် ဖြင့် www.ebtedge.comဝင် ကြည့် ပါ။
သင့် ပင် နံပါတ်ကို ခန့် မှန်း ကြည့်ရန် မ ကြိုးစား ပါ နှင့်။ လေးကြိမ်မြောက် ကြိုးစားမှု တွင် ထည့် သွင်း သော ပင် နံပါတ် မှာ မှားယွင်းနေ ပါ က ပင် နံပါတ် လော့ ခ် ကျသွား မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့် ပင် နံပါတ်ကို ခန့် မှန်း ပြီး အစားအစာ ခံစား ခွင့် များကို ရယူရန် ကြိုးစားခြင်း ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ သင့် ကတ် ကို ပြန် ဖွ င့်ရန် ည သန်းခေါင်ယံ အချိန်အထိ စောင့် ပါ။ သင့် အကောင့် သည် အလိုအလျောက် ပြန် ပွ င့်သွားမည် ဖြစ်သည်။